> Resource> iPod> ụzọ dị mfe iji Hazie Music on iPod
Ike gwụrụ nke scrolling ala ọtụtụ narị niile songs ịchọta gị chọrọ n'anya? Ọ bụrụ na ọ nsogbu gị, ị nwere ike mkpa a music Ọhazi-enyere gị aka hazie music on iPod. Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) bụ ike iPod music Ọhazi. Ọ na-enye gị ohere iji debe ihe niile music on iPod haziri na ọ bụla oge.
Na ya aka, ị na-enwe ike ike na aha listi ọkpụkpọ ịzọpụta songs na ụdị dị iche iche. Mgbe ị na-atụfu iTunes n'ọbá akwụkwọ, ị nwere ike mbupụ songs na ya ozugbo. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi hichapụ gị achọghị songs, a usoro-ahapụ gị wepụ ha na ogbe.
Download a iPod music Ọhazi na-agbalị na-ahazi music on iPod.
Cheta na: Nke a iPod music Ọhazi - Wondershare TunesGo ike gị iji hazie music on iPod aka, iPod nano, iPod ịkpọgharịa na iPod kpochapụwo. Ego zuru ezu Ama banyere akwado iPod na ụdị na-ha iOS. The Mac mbipute a ngwá ọrụ na-akwado iPod aka 4/5 na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 6 & iOS 5.
Olee otú iji hazie music on iPod
Na akụkụ n'okpuru, anyị ga-amasị-elekwasị anya na-ahazi music na gị iPod na Windows version. Wụnye na mgbe ahụ na-agba ọsọ a iPod music Ọhazi na PC.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod ka PC site na iji eriri USB
Mgbe-agba ọsọ a iPod music Ọhazi, ị kwesịrị ị jikọọ gị iPod ka PC site ịkwụnye n'ime eriri USB. Mgbe ịchọputa gị iPod, a iPod music Ọhazi ga-egosipụta ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. Hazie iPod music
Na-ekpe ndekọ osisi, pịa "Media". Na pịa "Music". Na music window, i nwere ike ime ọtụtụ ihe na-gị songs ọma haziri.
Tinye music faịlụ ma ọ bụ nchekwa site na PC na-iPod. Site na ịpị triangle n'okpuru "Tinye", i nwere ike ịhọrọ ma tinye music nchekwa ma ọ bụ music faịlụ gị iPod.
Etinye iTunes listi ọkpụkpọ iji iPod. Iji mee ka ọ, ị kwesịrị ị pịa "playlist" ke ekpe ndekọ osisi. Mgbe ahụ, pịa triangle n'okpuru "Tinye"> "Tinye iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ"> "OK".
Tọghata music ka iPod enyi na enyi ndị. Nke a na usoro-akwado converting AAC, AC3, adaka, AIFF, AMR, AU, FLAC, MKA, MPA, MP2, OGG, WMA, 3G2 ka MP3.
Preview songs Ama. Họrọ a song na pịa ziri ezi. Họrọ ịhụ ya onwunwe, dị ka omenkà, na-adịgide adịgide oge na album.
Bugharịa songs site na otu playlist ndị ọzọ nkịtị playlist. Họrọ songs na-eme ka a nri click. Họrọ "Export ka" ma họrọ a nkịtị playlist.
Cheta na: The Mac mbipute a ngwá ọrụ na-adịghị akwado agbakwunye iTunes listi ọkpụkpọ iji iPod.
Gbalịa TunesGo iji hazie music on iPod.